AmaRussia asanda kuyala ngokuqhubekayo izimpahla ezivela kwamanye amazwe, ikakhulukazi kumasayithi athandwa njenge-Aliexpress, Buyincoins ne-Ebay. Kubuye kwenzeke ukuthi othile unezihlobo noma abajwayele kude, futhi bathumela izipho noma nje bakuthumele eRussia. Ukudilizwa kwezimpahla ensimini yezwe lethu kwenziwa yiPostas yaseRussia noma ezinye izinkampani zokuposa, futhi ngendawo yomthumeli izimpahla zihanjiswa ngabathwali bendawo. Njengoba usondela kumamukeli, isimo sezinguquko zokuthumela, okukhonjiswa ensizakalweni yokulandelela inthanethi. Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi isimo sokuthi "ukuthunyelwa ezweni lokuhamba" nabo bonke abanye, nokuthi yini okufanele yenze uma ipulazi ilahlekile noma "inamathele" kwenye indawo.
Ngamaphi amasevisi ongawalandelela ukuthumela ngeposi
Isevisi evame kakhulu futhi ethandwa kakhulu idalwe yiPost yaseRussia, ibizwa ngokuthi - "I-Post Post yaseRashiya." Ukulandelela izinto zeposi. " Kulapho udinga ukungena inombolo yesazisi yephasela futhi uqinisekise ukuthi awusona i-robot. Uhlelo luzobonisa lapho iphakheji okwamanje. Kodwa, ngeshwa, maduze nje "Aliexpress" efanayo nezinombolo zamaphakheji zaqala ukuma ngendlela engenakwenzeka ukuzilandelela ngesayithi le-Post Post yaseRussia. Kunalokho, ungasebenzisa abanye.
Ngakho-ke, kunezingosi zokulandelela izimpahla ngokuqondile ukusuka e-China, ngoba amaphakheji avela lapho manje anenani elikhulu kakhulu. Ibizwa ngokuthi i-Track24 futhi isendaweni efanayo, futhi i-17track ne-ALITRACK. Abokugcina aba-3 abaceli ukuhlola kwe-robot, kodwa ngokushesha babheke indawo yepelsela enombolweni yokufaka efakiwe. Isevisi ye-17track ibuye ikhombise usuku lokufika ehhovisi lokuthunyelwe lomamukeli.
Uma umkhiqizo ushiywe kunsizakalo yokulandelela noma uxhonywe endaweni ethile esikhathini esisodwa isikhathi eside, kungenzeka ukuthi ukhohliwe ukuwufaka kulolu hlelo futhi ngeke ukwazi ukulandelela ukunyakaza kwawo uze uthola isaziso esivela kumeyili ukuthi ipheshana lihanjiswa. Kulolu cala, ungabhalela umdayisi ngokufaka isikrini esisevisi "Imeyili yaseRussia: Ukulandelela izinto ze-imeyili" noma enye lapho inkinga iboniswa khona. Ekupheleni kwesikhathi sokulethwa, umdayisi, ngokuvuma kwakho noma ungakwazi ukunweba isikhathi sokuletha ngokwakho noma ubuyisele imali ngesizathu esizwakalayo. Imali ivame ukubuyiselwa ngokushesha (kungakapheli kwezinsuku ezingu-3-5) ekhadini noma i-akhawunti lapho inkokhelo yenziwe khona, nakuba kungenjalo okokuqala. Ngezinye izikhathi umdayisi kufanele abhale izikhathi eziningana ukuze abuyisele imali, noma abuye axhumane nesevisi yokusekela, ngoba umthengisi akahlanganyeli. Kwenzeka ukuthi imali ibuyiselwe noma izimpahla ziyahlelwa kabusha, futhi okulahlekile kufike.
Lokhu kusho ukuthi iphasela eliqukethe impahla eyodwa noma ngaphezulu lihlanganisiwe noma selivele lihlomele futhi lilungele ukuthunyelwa. Inqubo yokulungiselela ihlanganisa nokulungiswa kwamadokhumenti kanye nokumaka amaphakheji. Futhi kulesi sigaba, umdayisi uhlola ukuthi ngabe inkokhelo yenziwe futhi ikhokhelwe.
"Thumela ezweni lokuhamba"
Lesi yisimo sesibili okuthengwa ngaso ngesikhatsi ngesikhathi sokuhamba, ngaphandle uma abanye behlinzekwa ngumdayisi noma inkampani yokuthutha. "Ukuthunyelwa ezweni lokuhamba" ngokwezwi nezwi kusho ukususwa kuleli zwe. Lokhu kusho ukuthi leli phasela linendlela ende yokuhamba.
Isikhathi esinikezwa ukulethwa kwezimpahla kumthengi, ngokuvamile siqala ukubalwa ngokuqondile nesimo "sokuthekelisa ezweni lokuhamba." Kuyoze kube nini ukulinda leli phasela libhalwa uma liyala: ezinye izimpahla zifika zingakapheli izinsuku ezingu-30, kanti ezinye-zingakapheli ezingu-90. Ngakho-ke, kufaneleka ukufunda ngokucophelela imigomo yokulethwa lapho kusetshenzwa nokukhokha okulandelayo. Uma le phakhethi ithunyelwa ngumngane wakho evela kwelinye izwe, ulinde kancane kakhulu, ngokuvamile lokho kufinyelela ezinsukwini ezingu-10-20.
Ukufika ezweni lakuyo
Lapho ukuthekeliswa kusuka ezweni lokuhamba sekuphelile, okungukuthi, izimpahla zishiya izwe lomdayisi futhi zawela umngcele, isimo sephasela shintsha. Kungaba nezinketho ezimbili: noma ngabe izimpahla zivele ngokushesha esikhungweni sokuhlunga eMoscow, noma uzoba emngceleni, kodwa kakade idolobha laseRussia eduze komngcele ayewela kuwo. Noma yikuphi, kuzoba nesimo "sokufika ensimini yeRussian Federation" noma "ukungenisa ezweni eliya khona" ezinsizakalweni zokulandelela.
Ukufika esikhungweni sokuhlunga
Izikhungo zokuhlunga yizakhiwo ezinkulu edolobheni elikhulu, lapho amaphasela nezincwadi zitholwa khona ukuze zisakazwe futhi zithunyelwe ezindaweni ezincane noma kumahhovisi okuthunyelwe kwesifunda. Lapho izimpahla zithunyelwa ezweni lokuhamba, selivele selizimisele ukuthi lizoqhubeka kuphi, yikuphi umuzi, ukuhlunga isikhungo neposi.
Esikhathini sokuhlunga, amaphakheji alawulwa ngokuzenzekela, ngoba ngesandla esikhulu isibhokisi samabhokisi namaphakheji cishe akunakwenzeka ukucubungula, ngakho-ke kubalulekile ukuthi inkomba ibhalwe kahle (ikheli alifundwanga lapha), ngaphandle kwalokho isisekelo sizoya kwenye indawo.
Ukufika ngesikhathi sokukhishwa
Uma umkhiqizo owathengiwe udlulile zonke izigaba zokuhamba, ufinyelela eposini eliseduze nomthengi. Ezinsukwini ezimbalwa, abasebenzi beposi bayabhala isaziso sokuthola futhi balethe umamukeli ebhokisini leposi. Uma umamukeli engakapheli isonto, isaziso sesibili sakhishwa. Leli qembu, elilele lingakapheli inyanga, libuyiselwa emuva.
Uma umuntu elandelele iphasela ngamasevisi e-intanethi futhi ebone ukuthi isendaweni, angeke alinde isaziso, kepha ukuze eze eposini ngenombolo yokuhamba futhi emva kokumbiza futhi eveza ipasipoti yakhe, athole ibhokisi ngempahla ethengwe.
Uma elahlekelwe wonke amaziso futhi akahambanga nesimo isikhathi eside, ngakho-ke lapho ezama ukuqonda lapho ipheshana likhona khona, angabona isimo "sokuthunyelwa ezweni lokuhamba" futhi, kodwa manje leli zwe lizoba yiRussia, okusho ukuthi ukuthenga sekubuyile. Lapha kuphela inkhulumomphendvulwano nomdayisi uzokusiza, angayeka ukudluliswa kokubuyisela noma athumele izimpahla futhi. Kodwa akubona bonke abathengisi abavumelana nalokhu, ngakho-ke, uma ulinde iphakheji evela phesheya, ungathembeli kwizaziso ezivela e-mail, kodwa hlola indawo yezimpahla wena ngokwakho.
I-SF Express Mail: Impendulo
Uyini blepharoplasty amajwabu amehlo engenhla?
Ukhonkolo. Izici, Izinketho, Isicelo.
Area Kuibyshev Samara: incazelo, umlando, amaqiniso athakazelisayo kanye nokubuyekeza